Ulawulo lomgangatho - Xuzhou QLT Trade Co., Ltd.
Iibhotile zewayini ebomvu
Izitayile kunye neMibala
Iingxelo zoKhuseleko lweMathiriyeli yiSGS
Iibhotile zethu ziye zavavanywa kwaye zaqinisekiswa liqela lesithathu elizimeleyo elibonisa ukuba inqanaba elinokufikeleleka kunye nenqanaba lecadmium lihambelana nommiselo we-FDA. Ngapha koko, amanqanaba ethu angaphantsi kakhulu komda ovumelekileyo obekwe yi-FDA. Ngolwazi oluthe kratya malunga neziphumo zethu zovavanyo, qhagamshelana nathi.
Malunga nesiQinisekiso seSGS
I-SGS yinkampani ehamba phambili yokuhlola, yokuqinisekisa, yokuvavanya kunye neyokuqinisekisa. Sithathwa njengophawu lomgangatho wehlabathi kunye nokuthembeka. Iinkonzo zethu eziphambili zingahlulwa ngokwamacandelo amane:
Uvavanyo lwe-1: I-SGS igcina uthungelwano lweendawo zovavanyo, ezinabasebenzi abanolwazi nabanamava, okukunceda ukuba unciphise umngcipheko, unciphise ixesha lokuthengisa kunye nokuvavanya umgangatho, ukhuseleko kunye nokusebenza kweemveliso zakho ngokuchasene nemilinganiselo efanelekileyo yempilo, ukhuseleko kunye nemimiselo.
2.Certification: Izatifikethi ze-SGS zikwenza ukuba ubonise ukuba iimveliso zakho ziyahambelana nokuba yeyiphi imigangatho yelizwe kunye nemimiselo okanye imigangatho echaziweyo yabathengi, ngokuqinisekiswa.
Isiqinisekiso sovavanyo lwe-US FDA GMP
Iinjineli zethu ezisendlwini ziqinisekisiwe yi-US FDA GMP Inspecion. Isatifikethi sokuhlolwa kwe-FDA GMP sinikezela ngemiyalelo yokwenza imisebenzi yokuvavanya ukuthotyelwa komzi mveliso kwiFederal Food, iziyobisi, kunye noMthetho weCosmetic kunye neminye imithetho elawulwa yi-FDA.